समानुपातिक फेरबदल गर्दै प्रमुख दलहरू :को-को परे समानुपातिकमा ? – Etajakhabar
समानुपातिक फेरबदल गर्दै प्रमुख दलहरू :को-को परे समानुपातिकमा ?
काठमाडौँ – समानुपातिक सांसदका लागि हतारमा सूची बुझाएका दलहरूले अधिकांश नाम फेरबदल गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित प्रायस् सबै दलले बुझाएको सूची ‘डमी’ मात्र भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टी उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको १ सय १० वटै सिटमा र ७ वटै प्रदेशका लागि समानुपातिक उम्मेदवारी दिइएको बताए ।, यो खबर आजको कान्तिपुरबाट लिइएको हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ३१, २०७४ समय: ७:४९:००